Top 10 Iindawo Eziyimfihlo Ehlabathini | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Top 10 Iindawo Eziyimfihlo Ehlabathini
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eJamani, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Zokuhamba Qeqesha Poland, Uloliwe ohamba eScotland, Uloliwe eSwitzerland, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 26/05/2021)
Amachibi angaphantsi komhlaba, iingxangxasi ezifihliweyo, indlela ebethiweyo iidolophu ezintle, kunye neembono ezintle, Ihlabathi lizele iindawo ezifihlakeleyo ezimangalisayo. Ezi ziphezulu 10 Iindawo ezifihlakeleyo eMhlabeni zonke ziyafikeleleka kubahambi kodwa zihlala ziphoswa. ke, lungiselela uhambo oluhamba ingqondo ukuya kwezona ndawo zifihlakeleyo kwaye zinomtsalane kwihlabathi.
1. Indawo efihlakeleyo ephezulu eJamani: Berchtesgaden
250 Iikhilomitha zeendlela ezinyukayo, Amanzi echibi acwengileyo, kunye neencopho ezintle, Berchtesgaden Ipaki yelizwe yenye yeendawo ezifihlakeleyo eziphambili eJamani.
Le paki yesizwe ilungile ecaleni komda waseJamani ne-Austria kwaye ilikhaya leyona ndawo intle eBavaria. Ngelixa uninzi lwabakhenkethi luhambela Black Forest, Swiss Alps, okanye iziko laseYurophu, le paki yesizwe imangalisayo ayihoywa. ke, unokuba ngomnye wabahambi abambalwa, ukwenza ipikniki nge IChibi iKonigssee, zama ukuhlangana eWatzmann - e 2,713 iimitha ze breathtaking iimboniselo Iintlambo, kunye nendalo yasendle engafumanekiyo.
ISalzburg ukuya eBerchtesgaden Kunye noLoliwe
EMunich ukuya eBerchtesgaden ngoLoliwe
ILinz ukuya eBerchtesgaden Kunye noLoliwe
Innsbruck eBerchtesgaden Ngololiwe
2. Eyona ndawo ifihlakeleyo e-Itali: I-Monastery yaseSanta Maria Dell Isola eTropea
Uninzi lwabakhenkethi bathambise ilanga kumanxweme egolide eTropea abayazi lendawo ifihlakeleyo. kunjalo, kanye ngentla kweentloko zabo, ehleli encotsheni yenduli enamatye, ingqongwe luLwandle lwaseTyrrhenian, yiNgcweliso yaseSanta Maria dell Isola.
Akucaci ukuba i-monastery yakhiwa yi-Benedictines okanye ama-Basilians ngamanye amaxesha kwi-Middle Ages. ke, Ungayifumana imbali kunye nobuhle ngasemva kwe-facade ehlaziyiweyo yeemonki. Ngaphandle kwamathandabuzo, isigodlo esasindayo 2 iinyikima, Ngokuqinisekileyo igcina ezinye zezona mfihlo zibalaseleyo nezinomdla eCalabria.
UVibo Marina eTropea Ngololiwe
ICatanzaro ukuya eTropope Ngololiwe
ICosenza eya eTropope Ngololiwe
ILamezia Terme eya eTropea Ngoololiwe
3. Eyona ndawo ifihlakeleyo eSwitzerland: I-Trummelbach Falls
Kwintlambo ye 72 iingxangxasi, ungacinga ukuba akukho nto ifumanekileyo Ingxangxasi eSwitzerland, kodwa ikho. Enye yeendawo ezifihlakeleyo eYurophu yiTrummelbach Falls. Olu luhlu lwe 10 Iingxangxasi ezityiswa ngumkhenkce eSwitzerland, wondliwa ngamanzi anyibilikayo e-Eiger naseJungfrau.
ngoko ke, xa undwendwela kwaye uhamba entabeni, bencoma ezi ngxangxasi zifihlakeleyo, nxiba iimpahla eziza kukukhusela kwiingxangxasi zempompo ezibandayo.
4. Seegrotte KwiHinterbruhl, Ostriya
A uhambo umkhumbi elona chibi likhulu liphantsi komhlaba eAustria ngamava angalibalekiyo. Oku kukhulu ukubona iGrotte kwidolophu yaseHinterbruhl, yinkqubo yemiqolomba, ekuqaleni yenziwe ngabantu ngeenjongo zokumba umgodi, kwi-WWII.
kunjalo, ichibi elingaphantsi komhlaba lashiywa ngelo xesha. namhlanje, iSeegrotte eHinterbruhl, iguqulwe yaba yenye yezona ziphezulu 10 iindawo ezifihlakeleyo ukutyelela ehlabathini.
5. Indawo eFihlakeleyo eTshayina: INtaba iSanqing
3 Ingqungquthela emangalisayo emafini, INtaba iSanqing yenye yezona zinto zingcwele kwinkcubeko yamaTshayina. Umbono weNtaba iSanqing ayisiyiyo enye yezona zinto zithandekayo kwimbonakalo yesiTshayina, kodwa ikwanentsingiselo engcwele kwinkolelo yobuTao; i 3 iintlanganiso zimele 3 Abanyulu, oothixo abaphezulu.
Indawo ejikeleze iSanqing ikwabonelela ngeembono ezimangalisayo, Iindlela, kunye namanqaku omlingo onokuwafumanisa kwi 10 iindawo ezininzi ezintle kule ndawo. ngoko ke, zibhukishe ngokwakho uhambo lweentsuku ezimbini ukuya eNtabeni iSanqing, ukuze ukonwabele ngokupheleleyo kwaye uphonononge onke amabala afihliweyo.
6. Iindawo ezifihlakeleyo eziphambili e-Itali: Trentino
Ubuhle beAlps zaseNtaliyane abuyiyo imfihlo egcinwe kwihlabathi. Wonke umntu uyazi malunga neentaba, imbonakalo-mhlaba, amachibi aneentaba, kunye namadlelo amahle. kunjalo, I-Trentino eMantla-Mpuma e-Itali, phakathi kwechibi Garda kunye neDolomites, ihlala iphoswa kwindlela eya kwi imimangaliso yendalo okhankanywe apha. Apha uya kufumana inani elibalaseleyo le- 297 ukufumanisa amachibi.
Ukwengeza, Kuphela apha unokuncoma ukukhanya okukhethekileyo kwealpenglow kwiincopho zeDolomites, ukutshona kwelanga.
7. Indawo eFihliweyo ePoland: Ihlathi eligwenxa e-Szczecin
Kutyalwe kwiminyaka engama-30, Ihlathi leSzczecin yenye yezona ndawo zifihlakeleyo ehlabathini. Oku kungenxa yesizathu sokuba ihlathi ligxothiwe ePoland, kufutshane nedolophu yaseGryfino. Isuka e 400 imithi yepayini ityalwe emva kwiminyaka engama-30, namhlanje uyakufumanisa ukuba bambalwa abaseleyo, isenza le ndawo ukuba ikulungele ukutyelelwa.
Isizathu sobume obukhethekileyo buyimfihlakalo kude kube namhlanje; abaninzi baye bazama ukuqonda ukuba ngaba yenziwa ngumntu okanye ngummangaliso wendalo. ke, ukuba uthatha isigqibo sokundwendwela, ungajonga imfihlelo yemithi yepayini’ ipineyimilo eyahlukileyo, kwaye ujonge enye ye amahlathi amahle kakhulu eYurophu.
8. Indawo efihlakeleyo ephezulu eHungary: I-Tapolca
ITapolca yidolophu encinci enomtsalane eHungary, imi kufutshane neBaltan Uplands Ugcino lwendalo. Uninzi lwabakhenkethi luya eHungary ngeholide eBudapest, kodwa idolophu yaseTapolca yeyona mfihlo igcinwe kakuhle eHungary. Ukongeza kufutshane nepaki enkulu yelizwe, isixeko sinedike embindini, kunye nekwere ethandekayo kunye neefestile ezijikeleze.
Ngaloo ndlela, ukuba ufuna ukungcamla ukutya kwaseHungary, ncoma kwaye ufumanise indalo emangalisayo yaseHungary, kunye nomqolomba wechibi, emva koko ubhukishe itikiti lakho ukuya eTapolca.
9. Indawo efihlakeleyo ephezulu eNgilane: Hunstanton, Norfolk
Xa undwendwela idolophu yaseHunstanton eNorfolk, iya kujongeka njenge dolophu ethe cwaka yeholide ngaselwandle. kunjalo, emva kokuba uye ezantsi elunxwemeni kunye nolwandle olunamatye, uya kufumana amawa amangalisayo. Amatye e-Old Hunstanton ngamatye e-sandstone enemibala; Ilitye lentlabathi lejinja elirusi, ilitye lekalika elibomvu elinechoko, ingqongwe lulwandle oluhlaza kunye nolwandle oluhlaza.
ngoko ke, Unxweme oluhle lwaseHunstanton luphefumla ngokupheleleyo, ngakumbi ukutshona kwelanga. Ngeli xesha losuku, Amawa atshintsha imibala, Umahluko phakathi kolwandle kunye namawa kwahluke ngakumbi. Ngaphandle kobuhle bayo bendalo, ababaninzi abayaziyo le ndawo ifihlakeleyo eMpuma yeNgilane. ke, Kungcono ukhawuleze ukubhukisha itikiti lakho lololiwe ukuya kwiilwandle zaseHunstanton, phambi kokuba lonke ihlabathi lifumanise.
10. Usingasiqithi weApplecross eScotland
Lo mmangaliso waseScotland wenziwa ukuba ufikeleleke ngendlela kuphela 1975, enamajikojiko kunye nendlela emaweni enqumla usingasiqithi kunxweme. ke, ukuba ufuna ukutyelela le gem ekude, kwafuneka uthembele kuhambo lwesikhephe wedwa, njengabo bonke abahlali besi siqithi.
IApplecross yilali entle entle kunxweme lwaseScotland. Iikhabhathi ezincinci ezincinci kunye nezindlu zisasazeke kwiinduli eziluhlaza, ejonge elwandle, uya kuwususa umphefumlo wakho.
Nge kuphela 544 abahlali, zimbalwa kakhulu izizathu zokuhamba ukuya kwiApple, kodwa iimbono ezicacileyo nezihle, ufumane ngokupheleleyo indawo njengenye yezona ziphezulu 10 iindawo ezifihlakeleyo ehlabathini. Ukwengeza, ICamusterrach kunye neArd-dhubh zezinye iindawo zokuhlala ezingaphoswa kukuhlola kwakho, nanjengoko nabo bengachukunyiswa kwaphela langoku.
Apha Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo olungalibalekiyo ukuya phezulu 10 iindawo ezininzi efihlakeleyo ehlabathini ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog “Phezulu 10 Iindawo Eziyimfihlelo Ehlabathini ”kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fsecret-places-world%2F – (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Indawo efihliweyo Iimpawu ezifihliweyo imfihlo Iindawo zeMfihlo Iindawo eziPhezuluYaseYurophu